Madaxweyne Qoor Qoor oo Nairobi kula kulmay Wafdi ka socda Dowlada Imaaraatka | Mudug24
Home Wararka maanta Madaxweyne Qoor Qoor oo Nairobi kula kulmay Wafdi ka socda Dowlada Imaaraatka
Madaxweyne Qoor Qoor oo Nairobi kula kulmay Wafdi ka socda Dowlada Imaaraatka
Waxaa shalay galab safar deg deg ah oon horey loo sii shaacin magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ugu ambo baxay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo Muqdisho u yimid shirka Madaxda Dowlada iyo maamulada.
Safarka deg dega ah uu Madaxweynaha Galmudug ku aaday dalka Kenya ayaa abuuray shaki badan, waxaana soo baxaya in Madaxweynaha ujeedka Kenya u aaday aheyd in uu la balansanaa saraakiil katirsan dowlada Imaaraadka Carabta.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Qoor Qoor kula kulmay hotel kuyaala magaalada Nairobi saraakiil katirsan dowlada Imaaraadka Carabta uu hogaaminayay Xuseen Darwiish Al-Shamsi oo ah Madaxa Mukhaabaraadka Imaaraadka u qaabilsan Geeska Afrika.
Ilo ku dhaw dhaw Madaxtooyada Galmudug ayaa laga soo xigtay in kulanka Madaxweynaha Galmudug iyo saraakiisha Imaaraadka uu ahaa balan horey u taalay sidaa darteed laga maarmi waayay in Madaxweynaha safar deg deg ah u baxo.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweynaha Galmudug oo raadinayay xiriirka dowlada Imaaraadka Carabta ayaa kala hadlay saraakiishan sida ay xiriir u dhax mari lahaa labada dhinaca loogana taageeri lahaa Galmudug arimo badan oo muhiim u ah xiligan.
Qoor Qoor ayaa dowlada Imaaraadka Carabta ka codsaday in gacan ka siiso dhismaha dekadda Hobyo oo horey u balan qaaday in ay dhiseyso dowlada Qadar balse ka gaabisay, waxa uu sidoo kale ka codsaday in dhanka ciidanka ka taageerto.
Kulankan qarsoodiga ah ee Madaxweynaha Galmudug iyo saraakiisha Imaaradaka dhax maray ayaa abuuray shaki badan, lamana oga sida dowlada federaalka oo xiriirka u jartay Imaaraadka uga falcelin doonto talaabadan uu qaaday Madaxweyne Qoor Qoor.
Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa xiriir toos ah la leh dowlada Imaaraadka Carabta halka maamulada kale ee taageera dowlada federaalka aysan wax xiriir la laheyn dowladaasi .
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa la filayaa in maanta dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho si uu uga qeyb galo shirka dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada oo la filayo in maanta ka furmo Muqdisho.
Previous articleSawiro:- Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay Madaxda Xisbiyada Dalka
Next articleMadaxweynaha Galmudug MD Axmed Cabdi Kaariye, ayaa magaalada Muqdishu kula kulmay Safiirka Soomaaliya u Fadhiya Dowladda Maraynkanka Danjire Yamamoto.